Chitatu, September 27, 2006 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Real estate ndeyekutanga pane webhusaiti, saka ndiri kuyedza kuve neinoshanda zvishoma neyangu. Ndakawana iyi nifty diki script ine iyo Mucheka WordPress theme kubva kuTubetorial.
Iwe unogona kuvaka zviitiko zvakati wandei mune yako mameseji munda HTML iyo icharatidza nekuvanza dhata sezvo munda unopinda uye wabuda. Edza izvi padivi rangu repadivi paunogona kunyoresa kunyorera email kune iyo blog.
Ne HTML5, unogona zvakare kuita izvi ne placeholder Element:
Kucherechedzwa pane Iyo Yakareba Muswe uye iyo Indasitiri yeMimhanzi